मोटर बीमा शुल्क आर्जन घट्यो, कुल दाबी र तेस्रोपक्ष दाबी भुक्तानी सुस्त ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > मोटर बीमा शुल्क आर्जन घट्यो, कुल दाबी र तेस्रोपक्ष दाबी भुक्तानी सुस्त !
काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुको गत आर्थिक वर्षमा मोटर बीमाबाट हुने बीमा शुल्क आर्जन, तेस्रोपक्ष दायित्व बीमाशुल्क आर्जन, कुल दाबी भुक्तानी र तेस्रोपक्ष दावी भुक्तानीको रकम घटेको छ ।
प्राप्त तथ्याङक अनुसार अघिल्लो आवको तुलनामा निर्जीबन बीमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन ३.७५ प्रतिशत, तेस्रोपक्ष दायित्व बीमाशुल्क आर्जन ४.३६ प्रतिशत, कुल दाबी भुक्तानी ६.२९ र तेस्रोपक्ष दावी भुक्तानी २४.८६ प्रतिशतले घटेको छ ।
निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ दुई पाङग्रे र चार पाङग्रे सवारी साधानबाट १० अर्ब ४५ करोड ३८ लाख ८ हजार ३१ रुपैयाँ मोटर बीमाबाट बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । प्राप्त तथ्याङक अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४० करोड ८४ लाख १३ हजार ७८३ रुपैयाँले कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले मोटर बीमाबाट १० अर्ब ८६ करोड २२ लाख २१ हजार ८१४ रुपैयाँ आर्जन गरेका थिए । यसमा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको तथ्याङक भने समावेश गरेको छैन ।
समितिका अनुसार गत आवमा निर्जीबन बीमा कम्पनीले तेस्रो पक्ष दायित्व बीमाशुल्कबाट २ अर्ब ९० करोड १५ लाख ८८ हजार ३६९ रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । यो पनि अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ४.३६ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा ३ अर्ब ३ करोड ४१ लाख ३५ हजार ६०३ रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै निर्जीबन बीमा कम्पनीले गत आवमा ५ अर्ब ६५ करोड ९० लाख २३ हजार ११८ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् । अघिल्लो आवको तुलनामा यो वर्ष कम्पनीहरुको दाबी भुक्तानी पनि ६.२९ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीहरुको दाबी भुक्तानी ६ अर्ब ३ करोड ९३ लाख २९ हजार ६६६ रुपैयाँ रहेको थियो ।
यस्तै तेस्रो पक्ष दाबी भुक्तानी पनि २४.८६ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ४९ करोड ३२ लाख ८६ हजार ८९८ रुपैयाँमा सिमित बनेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कम्पनीहरुले तेस्रो पक्ष दाबी भुक्तानी स्वरुप १ अर्ब ९८ करोड ७२ लाख ५२ हजार ६३४ रुपैयाँ गरेका थिए ।
२०७७ फागुुण २० गते १६:३० मा प्रकाशित
स्थानीय तहमा १३ हजार कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुलाउँदै
आईएमईए ग्रूपद्वारा खेलाडीहरुलाई सम्मान
मीरा राई एड्भेन्चर्स अफ द इयर अवार्डको मनोनयनमा !